भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणेको धेरै चर्चा किन ? « Mechipost.com
भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणेको धेरै चर्चा किन ?
प्रकाशित मिति: २२ कार्तिक २०७७, शनिबार १८:५९
फिदिम । १९ गते काठमाण्डौमा एकाएक सर्वसाधारणलाई विभिन्न सडकमा हिंड्न पनि रोक लगाइयो । कारण थियो भारतीय सेनाध्यक्ष नरभणेको भ्रमण् । दुई देशको सिमा विवादपछी नेपाल र भारतको बिचमा कुनै प्रकारको सम्वाद नभएका बेला सेनाध्यक्ष नेपाल आउनुलाई सरकारले ठुलो महत्व दियो । यसभन्दा अगाडि १७ जना सेनाध्यक्ष नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको उपाधी ग्रहण गरिसकेका थिए । तर यसपटक अत्याधिक चर्चा र चासो रह्यो ।
सेना प्रमुखलाई एक अर्को देशमा मानार्थ महारथीको दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्ने नेपाल र भारतको चलनलाई निरन्तरता दिन नरवणे आएका थिए । दुई देशबीच लामो समयदेखि औपचारिक संवाद नभएकाले नरवणेको भ्रमणलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको हो । गत वर्ष कात्तिक १६ मा भारतले कालापानीलगायतका भूभाग समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेयता काठमाडौं र दिल्लीबीच राजनीतिक तहमा पहिलेजस्तो राम्रो छैन ।
भारतले नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेपछि नेपालले तीनपटकसम्म औपचारिक रूपमा ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएर वर्षौदेखि थाँती रहेका सीमासम्बन्धी विवादमा छलफल गर्न आग्रह गरेको थियो । तर भारतले नेपालको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै कालापानी क्षेत्र भएर जाने पिथौरागढ–लिपुलेक सडकको ट्र्याक एकतर्फी ढंगले बनाईवरी वैशाख अन्तिम साता उद्घाटन ग¥यो । त्यसपछि नेपालले पनि लिम्पियाधुरासम्मको भूभााग समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेर संविधानसमेत संशोधन ग¥यो । नेपालको कदमका बारेमा नरवणेले नै नेपालले अरु कसैको उक्साहटमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमाथि दावी गरेको टिप्पणी गरेका थिए ।
त्यसैले पनि उनको भ्रमण बढि चर्चामा रहेको हो । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको औपचारिक निमन्त्रणामा तीनदिने भ्रमणका लागि नेपाल आएका नरवणे शुक्रबार स्वदेश फकिएका छन् । नेपाल भ्रमणका क्रममा जनरल नरवणेलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गरिएको थियो । नेपालका तर्फबाट मानार्थ महारथी प्राप्त गर्ने भारतीय स्थलसेनाध्यक्ष जनरल नरवणे १८औँ सेनापति हुन् ।
त्यस्तै दुई देशबीचको सुरक्षा सहयोग आदानप्रदान सम्बन्धी तेह्राँै बैठकमा भएको सहमतिअनुरुप स्थलसेनाध्यक्ष नरवणेले नेपाली सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेका थिए । नेपालमा रहदा नरवणेले शुक्रबार नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए ।
भेटमा दुईपिक्षय सम्बन्धका बारेमा कुराकारी भएको बताइएको छ । दुई देशको सैन्य सम्बन्ध र रक्षा सहकार्यबारे छलफल भएको बुझिएको छ । भेटमा प्रधानमन्त्रीसँगै विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेल पनि सहभागी थिए भने नरवणेसँगै नेपालस्थित भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा पनि सहभागी भएका थिए । जे होस नरवाणेको भ्रमणले नेपाल र भारतबीच हुन नसकेको सम्वादको ढोका खोलेको अपेक्षा गरिएको छ ।